Home Wararka Ciidamada Israa’iil oo Gantaalo garaacay Caasimada Suuriya
Ciidamada Israa’iil oo Gantaalo garaacay Caasimada Suuriya
Wakaaladda Wararka dalka Suuriya ayaa shaacisay in Saaka Aroorkii ciidamada Yuhuudda ay Gantaallo kusoo rideen meel u dhow Garoonka Diyaaradaha Magaalada Dimishiq.
Garoonka ayaa waxaa ku sugnaa xilligaasi ka diyaarad rakaab ah oo laga leeyahay dalka Iiraan.
Lama xaqiijin Wali Khasaaraha ka dhashay Gantaallada lagu dhuftay meel Saldhig ah oo u dhow Caasimadda Suuriya.
Ciidamada Suuriya waxa ay sheegeen in ilaa iyo hadda aysan xaqiijin karin Khasaaraha ka dhashay Weerarkaasi,laakiin ay bixin doonaan Jawaab.
Afhayeen u hadlay dowladda Israaiil ayaa beeniyay in ciidamada Isra’iil ay ka dambeeyeen duqeyntaasi, waxaana uu sheegay in aysan jirin weerar ay halkaasi ku qaadeen.
Previous articleMareykanka oo qafiifiyay Mowqifkii uu ka taagnay Mujaajiriinta
Next articleFarmaajo oo loo gudbiyay Dacwad ka dhan ah Labo Xildhibaan
Gudoomiye Ku Xigeenkii Hore Ee Degmada Kaaran Mukhtaar Cali Cadoow iyo...
﻿﻿Heritage oo soo bandhigay 4 qaab doorasho oo dalka uga dhici...